Ebe na-edezi na post ọrụ dị nnọọ mma na ihe ọ bụla oru ngo bụ ihe anyị niile ịhụ maka, ndị kacha ebumnuche bụ maka ndị ọzọ ịhụ ndị anyị kere, na ndị kasị ewu ewu ụzọ nweta na bụ YouTube. Ohere na-, ma ọ bụrụ na ị na-amị video, ị ga-etinye ụfọdụ n'ime ya na YouTube na ụfọdụ mgbe ahụ, ka nwere a lee anya na kasị oru oma ụzọ na-arụ ọrụ gị si Premiere ka YouTube.
1. nna ukwu Copy
Tupu exporting ọrụ gị, ọ dị mkpa ka akpa ike a nna ukwu oyiri nke gị na oru ngo nke ahụ bụ 'dị ka bụ', na ọ na-egosi ntọala na na codecs eji na mbụ footage.
Iji mee nke a ị nanị họrọ usoro n'ime usoro iheomume ma ọ bụ na Project Panel, na-aga site menu osisi site File> Export> Media iji bugote bupu kwuo.
Ike gị nna ukwu Detuo, nanị họrọ mbụ nhọrọ nke 'egwuregwu usoro Ntọala', nke a na-ebupụ a faịlụ na bụ nke otu àgwà dị ka gị mbụ footage, nnoo amị a dijitalụ oyiri nke-arụ ọrụ maka archiving tupu ihe ọ bụla ọzọ na-eme.
Na unu na-arụ ọrụ nchebe ọ bụ ugbu a oge anya na huu ngo bụ adabara YouTube. Na anyị usoro họrọ na usoro iheomume ma ọ bụ Project Panel ọzọ, anyị na-aga site n'otu File> Export> Media ụzọ iji bugote media bupu mkparịta ụka dị ka tupu.
Mbụ nhọrọ anyị nwere ga-atụle bụ faịlụ format na anyị okokụre video kwesịrị ịbụ na. Ebe ị kwesịrị na-ezo aka YouTube n'ihi na ya ụkpụrụ nduzi, ebe ha na-anara a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats, egwu ala site na YouTube aka usoro ịchọta ntọala maka kasị mma anyị na-ahụ na ha nwere ike ikwu MPEG4 dị ka akpa, na-eji H.264 codec.
Anyị nwekwara ike ịhụ n'ihu na-atụ aro ntọala a screenshot na a ga-kpuchie mgbe e mesịrị.
The ozi ọma bụ na Premiere na-akpaghị aka na-ahọrọ kwesịrị ekwesị akpa maka anyị mgbe anyị họrọ anyị codec, Otú ọ dị ọ bụ uru maara faịlụ ụdị YouTube na-atụ anya na dị nnọọ ka ego onwe gị.
Ya mere na ọ malitere ịchị na YouTube-atụ aro MPEG4 akpa na iji H.264 codec, mbụ nhọrọ anyị mkpa ka anya n'ihi na media bupu mkparịta ụka bụ họrọ ihe kwesịrị ekwesị Format.
Nke a bụ mbụ dobe ala na mkparịta ụka igbe, na a na ikpe anyị nanị họrọ H.264 site na listi.
Ozugbo ị họrọ H.264 ị nwere ike ịlele 'mmepụta aha' ubi na-ahụ na premiere na-akpaghị aka ịtọ mmepụta faịlụ ka .mp4 nke bụ kpọmkwem ihe dị anyị mkpa.
The ọzọ ubi anyị na-abịa bụ 'Atọrọ' dropdown menu. Nke a bụ isi aka ọtụtụ ndị, dị ka Adobe nwere nnọọ obiọma gụnyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke presets ngwa ngwa imeghari video ntọala ona kpọmkwem ojiji. Ha iche iche dabere kpọmkwem version nke Premiere ị na-eji, na onye ọ bụla format ụdị nwere ya ndepụta nke presets, H.264 ka anyị pụrụ ịhụ nwere nnukwu nọmba maka YouTube, kamakwa nwere ọtụtụ presets n'ihi na ụfọdụ ngwaọrụ (presets maka iPad, Kindle, nook, iche iche ndị ọzọ mbadamba na ntị, Vimeo na a usu nke ndị ọzọ) na-eme na-nri ntọala na bit dịkwuoro anyị mfe.
Ọ dị mkpa ebe a iji họrọ ziri ezi preset si dị iche iche YouTube nhọrọ. Na ị chọrọ iji họrọ mkpebi na etiti ọnụego nke dakọtara gị isi iyi faịlụ, maka nsonaazụ kacha mma. Ya mere, ọ bụrụ na gị isi iyi faịlụ bụ 1080p na a etiti ọnụego nke 29,97 fps mgbe ahụ na nke ahụ bụ YouTube mwube ị ga-họrọ.
Ozugbo a preset họrọ a nchịkọta nke ntọala na egosiri n'okpuru, ejikari ndị a ga-ọma ruru eru gị oru ngo, Otú ọ dị, i nwere ike hụchaa ihe ọ bụla ị chọrọ site na-ahọpụta video ma ọ bụ ọdịyo na taabụ na ala nke na-enye gị ohere iji ịgbanwe onye ọ bụla oke n'otu n'otu. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a, ị nwere ike ịzọpụta mgbanwe ndị a dị ka a omenala preset site na ịpị bọtịnụ na n'akụkụ nke Atọrọ dropdown menu na nanị jiri ya na mgbe e mesịrị oru ngo site na-ahọpụta ya site na ndepụta ahụ dị ka ihe ọ bụla ọzọ, a oké oge na-azọpụta ngwá ọrụ .
Ozugbo ị nwere afọ ojuju na ntọala, ma si Atọrọ naanị ma ọ bụ ọ bụrụ na i gbanwee ihe ọ bụla onwe gị, ị na-fọrọ nke nta njikere ijere faịlụ na mbupụ ya.
N'ihi na YouTube ọ na-atụ aro na i họrọ 'Jiri Oke-enyenụ Ogo' nhọrọ ịnọgide na-enwe kasị mma mmepụta i nwere ike, ọ dịghị tinye oge ijere usoro ma ọ bụrụ na i ji ihe àgwà nke ọrụ gị ọ bara uru.
N'ikpeazụ, i nwere ike ịhọrọ a kwesịrị ekwesị filename na ebe nke faịlụ site na ịpị 'mmepụta aha' ubi.
M na-ejikarị na-eji a filename na-agụnye ebe na-ajụ otú m nwere ike ọdịiche dị n'etiti nsụgharị dị iche iche nke a oru ngo na mara onye bulite ebe, ke idaha m na-agụnye 'youtube', ma ọ bụrụ na m na-eme atụmatụ na-ebugote mkpachị nke oru ngo na Vimeo nakwa ihe atụ e nwere ike ịbụ a ịkpụ nke oru ngo na 'Vimeo' n'aha kwa. Ebe bụ onye mmasị, n'ihi na m na-eme iji filenames ka ọdịiche dị nsụgharị m nwere ike na-etinye dị iche iche iterations otu oru ngo faịlụ, ndị ọzọ nwere nchekwa owuwu ọ bụla ụdị faịlụ, otú niile YouTube mmepụta na-aga n'ime otu nchekwa na na, otú ị na-ahazi bụ kpamkpam dabere na otú ị na-arụ ọrụ.
Ozugbo ndị na-ahọrọ na ịpị 'Export' amalite nsụgharị usoro, na n'ikpeazụ (otú oge na-adabere na ọsọ nke gị na kọmputa na size na ụdị faịlụ aka), ị ga-ejedebe na gị YouTube kachasị video na ọnọdụ ị họọrọ.
Ugbu a, i nwere faịlụ gị, nzọụkwụ ọzọ bụ na-aga gị YouTube akaụntụ na abanye na ọ bụrụ na ị chọrọ.
On n'elu gị homepage na nri bụ bulite button, na-ahọpụta nke na-eweta ihe họrọ faịlụ menu dị ka n'okpuru.
Ị nwere ike ma ịdọrọ gị faịlụ n'ime window ma ọ bụ pịa ya na-emeghe a ọkọlọtọ faịlụ nchọgharị aka ịchọta ndị chọrọ faịlụ, pịa na bulite ga-amalite. The dropdown n'okpuru-enye gị ohere iji tọọ video dị ka Public, Unlisted ma ọ bụ onwe. Ị nwere ike ịgbanwe nke a n'oge ọ bụla ozugbo video na uploaded dị ka mma.
A na-emeghere bulite ọganihu window, ebe i nwere ike tinye na a aha, nkọwa na mkpado yana ịgbakwunye video ka a playlist ma ọ bụ kpatụ mwube nzuzo dị ka video bụ na-ebugote.
Ozugbo bulite dị ka okokụre, ị pụrụ ime ikpeazụ mgbanwe iji ntọala ma họrọ a thumbnail maka video. Ikpeazụ nzọụkwụ bụ pịa 'Kwusaanụ' button na gị video ga-esichara na aga ndụ.
Nke a bụ isi nkuzi banyere Adobe Premiere, ọkachamara video edezi software. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video edezi bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), nke bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
6 kasị bara uru Adobe Premiere Atụmatụ maka Mma Video edezi
> Resource> YouTube> Olee Otú m Jiri Adobe Premiere bulite YouTube Videos?